Waa wakhti aad kor ugu qaaddo si aad isugu qorto diyaarad sare! Isku darka iyo tuur! (soo saaro) - NYE Countdown for Djs, Vjs, Nightclubs 2019
SKU: DJ DROPS 70 - # 55 Category: DJ Drops
Waa wakhti aad kor ugu qaaddo si aad isugu qorto diyaarad sare! Isku darka iyo tuur! (soo saaray)
Gangnam Style? Dhab ahaan ... Daddo joojin! (soo saaray)
La soco caruurta, la soco! (soo saaray)
Oo hadda ... heesaha qaybta dheer ee habeenkii ayaa bilaabmaya. (soo saaray)
Ku laabashada 80's classic this fasax la'aanta ah! (soo saaray)
Waad ku mahadsantahay inaad soo baxdo oo aad u dabbaaldegto sanad-sannadka cusub ee nala soo xiriir. Hadda waan xidhnaa si aan kuugu aragno Waffle House! (soo saaray)
Codadka DJ Audio Audio
Ilaa illaa 30 Seconds oo ah warqad qaabaysan oo leh maqal iyo saameyn! Dhammaan cajaladaha oo dhan waxaa lagu xushay magacaaga dj, shirkad ama naadi gudaha dhibcaha. Waxaad haysataa xulashada codadka Dheddiga ama Labka ah. American, British ama Spanish. Wanaagsan adigoo ku sharxaayo isku dhafka iyo naadiyada kooxda! Djs mobile-ka ah ayaa isticmaala kuwan si loogu daro xamaasad badan si ay u muujiyaan arooska iyo aroosyada magacyadooda. Waxay sameeyaan dareen weyn!
Laga soo bilaabo dhammaanteen ... Sanadka Cusub. (soo saaray)
Mudanayaal iyo Marwooyin. Hadda waa inaan sidaas sameeyo. Halkan waxaad ku iman kartaa nalalka fool xun! (soo saaray)